Iyo Apple Watch inogona kunge iine MicroLed skrini yakabatana ne PlayNitride | Ndinobva mac
Apple inogona kunge ichidzidza kusvika pachibvumirano nekambani yeTaiwan PlayNitride, mugadziri weMicroLed skrini yekugadzira mascreen. Ichi chigadzirwa chinokwana iyo physiognomy yeApple Watch. Isu tinoziva nhau kubva Digitimes. Iyo magazini ingadai yakawana ruzivo kubva kublog rakatsaurirwa chete kune ino MicroLED tekinoroji.
PlayNitride inozivikanwa nekugadzira yayo yega MicroLED tekinoroji inoratidza. Haisi nguva yekutanga kuti hofori yehunyanzvi inosvika kukambani kuti ivhare chibvumirano mukugadzirwa kwezvikwiriso. Samsung yaive mukutaurirana pakutanga kwa2017, isina kuvhara chero chibvumirano chekugadzira skrini.
Panguva ino, Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti zvibvumirano pakati peApple nekambani zviri kumberi. Runyerekupe runoratidza kuti PlayNitride ichave iri mukukurukura nehurumende yeTaiwan, uye vangatove nemvumo yekumisikidza nzvimbo hombe muHsinchu Science Park, iri kuchamhembe kweTaiwan.
MicroLED tekinoroji yaizotsiva iyo yazvino OLED, iripo muApple Watch uye ichangobva kuburitswa iPhone X. Iyo MicroLed tekinoroji, inogoverana neazvino masikirini iwo chaiwo mukururama kwemavara, nguva yekusiyanisa uye nekukurumidza mhinduro, vatema vechokwadi. Asi mukumufarira, iyeMicroLed tekinoroji inogonesa yakaonda uye yakawanda yakajeka kuratidzira, pamwe nekuwedzera simba simba.
Haisi nguva yekutanga kuti Apple iri mukutaurirana nekambani, semupiki wezvikwereti zvemakomputa ayo. Muna 2015 vakava nekutanga kuonana. apo kambani yakaisa mari yakawanda mukutsvaga muTaoyuan City. Kubva ipapo Apple iri kuongorora kugadzirwa nevatengesi vemazuva ano, kana kuisa kugadzirwa kwemasikirini echigadzirwa nekambani, zvichibva pahunhu hwezviratidziri zvavo.
Muchokwadi, Bloomberg yakashuma nezve iyo Kuvandudzwa kweApple pavhu reAmerica, uko kwaizenge kuri kutsvaga dhizaini uye kunyange kuyedza kugadzirwa kwemazhinji kweMicroLed kuratidza. Mune ino kesi, zvaizotarisira pamugadziri TSMC kugadzira ayo ma skrini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iyo Apple Watch inogona kunge iine MicroLed skrini yakabatana ne PlayNitride
Apple Pay inoramba ichiwedzera muFrance, Canada neUnited States.
Apple patents nyowani Misoro-kumusoro Ratidza system neAugmented Reality